Nampiantrano Fampirantiana Vorona Afrikana Faha-4 i Uganda - Toeram-pizahan-tany lehibe
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Oganda » Oganda dia nitazona fampirantiana vorona afrikanina faha-4 - fizahantany lehibe
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao Mafana Oganda
Oganda dia nitazona fampirantiana vorona afrikanina faha-4 - fizahantany lehibe
Ny fijerena vorona dia iray amin'ireo orinasam-pizahantany mivoatra haingana indrindra eran'izao tontolo izao, mipoitra ho sehatry ny indostrian'ny fizahantany miorina amin'ny natiora izay ifantohan'ny fitsidihan'ny fizahan-tany ny fitsidihana toerana hahitana vorona.
Ny mpiambina vorona dia mpamatsy vola be indrindra eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Amin'ny salan'isa, mandany $ 7,000 mahery izy ireo mandritra ny 21 andro, manao izay hahitana tombam-bidy tena tsara ny fijerin'ny vorona.
Nanjary hetsika goavambe tao amin'ny valan-javaboarin'i Oganda ny fijerena ny vorona, izay nitondrana dolara fidiram-bola ilaina tokoa.
The African Birding Expo kasaina hatao ny 10-12 desambra 2021 any Entebbe, Ogandà.
Araka ny filazan'i Herbert Byaruhanga, Tale Mpitantana ny Bird Uganda Safaris Ltd.: “Ny mpijery vorona dia anisan'ireo mandany be indrindra amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny fizahantany izay mitentina 7,000 dolara eo ho eo mandritra ny 21 andro. fahafahana lehibe hampiovaova ny fizahantany any Ogandà izay miankina kely amin'ny fanaraha-maso gorila. Uganda dia manana karazam-borona mihoatra ny 1,083, ny sasany ao anatin'izany ny endemika fonenana tsy fahita firy, isam-paritra ary Albertine izay tadiavin'ireo mpiambina vorona iraisam-pirenena hanampiana ny lisitr'ireo vorona. ”
Stephen Masaba, talen'ny fampandrosoana orinasa ao amin'ny Uganda Wildlife Authority, dia nidera ny fiezahana hampiofana mpiompy vorona maro kokoa satria ny fijerena vorona dia nanjary hetsika lehibe teo amin'ny Valan-javaboarin'i Ogandà, misarika fidiram-bola bebe kokoa.
Ity fampirantiana vorona afrikanina fahaefatra ity dia nanjary teboka fihaonana ho an'ny vondrom-piarahamonina mpiambina vorona ao anatiny sy ivelan'i Afrika. Mitombo ny fangatahan'ny matihanina amin'ny fanaovana zana-borona sy ny indostrian'ny fizahantany handray anjara amin'ny fitsangatsanganana familiarization izay atao alohan'ny fampirantiana. Ireo mpandray anjara amin'ny fitsidihan'ny Birding Expo Afrikana dia avy amin'ny firenena maro isan-karazany toa an'i Panama, Taiwan, Australia, USA, UK, Rwanda, Kenya, ary Tanzania. Ny mpivarotra dia misy orinasa fizahan-tany, hotely, trano fandraisam-bahiny, toby fitobiana, mpitari-dalana, mpivarotra boky, asa-tanana, trano fisakafoanana ary mpamorona endrika.
Ny African Birding Expo dia kasaina hanangana marika tohanana matanjaka sy azo fantarina izay manintona ireo mpitsidika anatiny sy iraisam-pirenena ary manohana ny fitehirizana sy ny fitomboan'ny fiambenana vorona any Oganda. Ity fanontana ity dia hisarika mpitazam-borona an-jatony, mpanoratra mpanoratra, mpizaha tany, tompona trano fandraisam-bahiny safari, ary mpilalao hafa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany manerana an'izao tontolo izao mifantoka amin'i Afrika ho toerana voalohany ahazoana mijery vorona. Ny hetsika fampirantiana dia hahitana fitsangatsanganana mialoha sy aorian'ny fanaovana expo, fanaovana fampirantiana, forum momba ny asa aman-draharaha, toeram-pitsaboana vorona, fitsangatsanganana vorona, toeram-pivarotan-tsary, fiofanana momba ny fanaovana vorona efa lasa lavitra, ary fanombohana magazina vorona, hanomezana anarana ny sasany.